PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-10 - Ukunconywa kukachillies kulahlekisa ithemba
Ukunconywa kukachillies kulahlekisa ithemba
Ilanga langeSonto - 2017-09-10 - Imibono -
KUYAMANGAZA okwenzeka emiphakathini esiphila kuyo esikhathini samanje. Kusukela ngeledlule kushone umlisa osolwa ngokuba yisigelekeqe esinzima ebesintshontsha izimoto uchillies Bhengu wasemlazi, kuningi okwenzekile nokukhulunyiwe okushaqisayo.
Nakuba sekuwumkhuba ojwayelekile ukuba kwenziwe imigilingwane ekushiya ubambe ongezansi uma kushone izigilamkhuba kodwa iqiniso wukuthi kakujwayeleki neze lokhu okusuke kwenzeka.
Kwakha isithombe esisobala esikhomba ukuthi imiphakathi esiphila kuyo manje isishintshe kakhulu futhi kukude lapho kuyiwa khona.
Imibhiyozo eyenziwa ngabasuke besondelene nayo iyashaqisa futhi ishayisa ngovalo.
Le mibhiyozo eyenziwa uma kushone isigelekeqe yenza kubukeke sengathi ubugebengu buyinto enhle, ejwayelekayo, futhi esesitayeleni. Iqiniso wukuthi kubantu abaqotho le mibhiyozo iyenyanyeka, ayinambitheki.
Kuyinto engenamqondo ukubhiyozela umuntu obengawuhlalisile kahle umphakathi, ewuhlupho. Okubi wukuthi le mibhiyozo yenziwa bukhoma emini kwabha, kubuka nezingane. Asazi-ke ukuthi sifundo sini esidluliselwa ezinganeni yilaba abasuke bebhiyoza, abanye babo okungabazali.